NGUBANI UCINGO LWE-ELEKTRA? DIBANA NORUPAUL'S TSALA UMDYARHO WEXESHA LASE-UK UKUMKANIKAZI WE-3 - UMABONAKUDE WENYANI
Ngubani ucingo lwe-elektra? Dibana noRuPaul's Tsala umdyarho weenkwenkwezi wase-UK kunye nebhinqa lomkhosi wasemantla
Ngaba ukhuphiswano luya kuba nzima njengakwixesha elidlulileyo? Ewe, sele siza kufumanisa ukuba uluhlu lwesithathu lweRuPaul's Drag Race UK luyeza kule nyanga, kwaye ngoku siyawazi amagama abo bonke oQueens abanomdla abaya kuthi batyibilike kukhuphiswano.
Phakathi kwabo kukho i-Elektra Fence, ejoyina kulo nyaka Tsala umdyarho wokhuphiswano lwaseUK Ukusuka eBurnley. Kodwa ngaba uya kukwazi ukuphuma ephumelele?
Nantsi yonke into esiyaziyo malunga ne-Elektra Fence ukuza kuthi ga ngoku.
Ucingo lwe-Elektra -Iinyani eziphambili
I-Instagram: isixhobo sokukhetha umbala
Ngubani ucingo lwe-elektra?
Ukuthetha no Amaxesha amaGay , I-Elektra ityhila imvelaphi yegama lakhe kwaye ngokwenene zivela kwisehlo esichaphazela ucingo lombane.
NdandiMantla ndihamba nenja kunye nam iqabane. Wayephethe olu cingo egadini yakhe kwaye wayefana nokuthi, 'Chukumisa ucingo, Julian. thetha, kwaye bendihlala ndiyiphosa. Ngomzuzu olandelayo ndothuka ndaza ndahlala phantsi kwiitopu zeenkomo. Ndagutyungelwa ludaka, inja yam yayibaleka kwindawo ethile kwaye ndandifana, 'Kuqhubeka ntoni?' Ke ngokucacileyo, kufanele ukuba ibethe into apha kuba iyenzile le nto.
Uyazichaza njengebhinqa eliliqhawe laseMantla kwaye udwelisa uBet Lynch noJane McDonald njengezimbini zokukhuthaza kwakhe - ukhetho oluqinileyo kwalapho.
Uthini u-Elektra ngokujoyina iRuPaul's Drag Race UK?
U-Elektra uchulumancile kukujoyina umboniso kwaye uziva ngathi kukuqinisekiswa kwexesha lakhe esikolweni xa engamkelwanga ukuba wayengubani. Ewe, yamkelwe sithi sonke ngoku.
Njengomntwana ndakhethwa esikolweni ngenxa yothando lomdaniso, ukuba ngumfazi kwaye ndenza nje ngokwahlukileyo.
Namhlanje ndibhiyozelwe yona. Ndiziva ndimnandi kwaye ndamkelwe.
Oku kwenzelwe bonke abantwana abaye bagwetywa ngokwahluka kancinci.
Kuya kuba ngcono
Ucingo lwe-elektra (@ElektraFence) Nge-18 ka-Agasti 2021
Iqala nini iRuPaul's Tsala i-UK isizini 3?
Uthotho lwesithathu luza kufika ngoLwesine, nge-23 ka-Septemba ngo-7 ngokuhlwa BBC iPlayer . Iziqendu ezitsha ziya kukhutshwa ngeveki emva koko.
Kubulawe ijaji yodumo ukunceda ipaneli, kunye no-Oti Mabuse, Kathy Burke, Matt Lucas, Alesha Dixon, Emma Bunton kunye noLeigh-Anne Pinnock bonke baqinisekisile ukuza kuthi ga ngoku nobuso obudumileyo ngenxa yokubhengezwa kungekudala.
Ixesha lokutsala u-RuPaul wase-UK ixesha lesithathu liqala ngoLwesine, nge-23 ka-Septemba. Amaxesha onyaka amabini anesibini eRuPaul's Drag Race UK ziyafumaneka ukubukela kwi-BBC iPlayer.Ukuba ufuna okungakumbi ukubukela jonga isikhokelo sethu seTV okanye undwendwele indawo yethu yoLonwabo ngeendaba zamva nje.
amanyathelo ityhubhu rubix
Iingcamango zesinxibo ukusuka kwi-90s
ukuqaliswa kwe-rocket namhlanje ngexesha lase-uk
leliphi inani elimele
izithako for oobleck
yafotwa phi icoroner
uthando amanani kunye neentsingiselo